Iigunons zamadoda-Ifashoni yeenwele zakho kumadoda aneSitayile | Amadoda aQinisekileyo
UAlicia tomero | | Ukunyamekela, fashion, Isitayile esinenwele
Akusekho mahluko phakathi kwesini xa kufikwa kumba wokuqokelela iinwele. Kuwo onke amadoda aneenwele ezinde, inokunika olo cingo lokutsha kunye nobukhazikhazi. Ngakumbi ubudala okanye isitayile umntu ngamnye afuna ukusinxiba, kwezi ntsuku ungazithatha ujike kwaye unxibe ngokukuko inkangeleko oyifunayo, kwaye Izaphetha zamadoda zisefashoni.
Amadoda angamadoda akusafuneki ukuba aqokelelwe nge-updo encinci encinci kwaye abotshwe ngebhanti yerabha, ngoku Ubheja kwiibhanti eziphezulu, iiponytails okanye ezinye uhlaziyo olubizwa ngokuba ziinwele ze-samurai. Ngumkhwa obonakala ngakumbi nakumajelo eendaba, kuyinto eqhelekileyo kuthi ukuyibona koosaziwayo, kwiimvubu nakubadlali.
1 Iindidi zeentolo zamadoda
1.1 I-samurai bun
1.2 Isitayile esiqhelekileyo
1.3 Ibhondi encinci
1.4 Ibhanti eboshiweyo
1.5 Ibhokhwe ephezulu
1.5.1 Ukuba iinwele zakho zigobile
1.5.2 Kumadoda aneenwele ezinde kakhulu
1.5.3 Ibhonkco encinci ikwakhona.
Iindidi zeentolo zamadoda
Nika iinwele zakho i-twist entsha, uhlaziye umzimba wakho ngaloo mihla ishushu kwaye ubeke iinwele zakho phezulu. Zininzi izitayile kwaye kuya kufuneka ukhethe ezona zixhaphakileyo nezona zilungele ubuntu bakho.
Olu hlobo lwesaphetha samadoda linyathelo elinye kwiinwele eziqokelelweyo, kuba ukuphakama kwayo kuphezulu. Kungenxa yala madoda akholelwa ngokwabo ukuba ngamagorha asezidolophini kwaye kunjalo yeyangoku, intle kwaye yendalo. Umkhwa wawo ungowala maxesha kuba uhlala unxitywa nentshebe engqindilili. Isitayile sakhe kukuyinxiba ngeenwele zakhe ezichetyiweyo emacaleni kunye nesaphetha kwisithsaba esifana nesamamura:
Kufuneka uqondise iinwele.
Yikhethe ngeponytail, ephezulu kakhulu, ngaphezulu okanye kancinci kwisithsaba.
Gweba i-ponytail kwi-bun kwaye uyikhusele ngezikhonkwane ze-bobby.
Ukuyikhupha phezulu, ungasebenzisa i-hairspray encinci ukuyenza ihlale ixesha elide.
Le nwele ibonisa isitayile sakhe ukuba igama lakhe lithi njani: "ngokungekho sesikweni". Endaweni yoko Yibhonkco eqokelelwe phezulu entloko kodwa ngendlela emdaka neqhelekileyo. Akunyanzelekanga ukuba ibhalwe ngokugqibeleleyo kodwa kufuneka ibe nomthamo omncinci. Ukwenza oku, faka igwebu elincinci kwizinwele zakho kwaye ulishukumise kancinci ukuze ulinike umthamo. Emva koko yiphakamise kwaye uyibophe ngebhanti yerabha ngentla kwentloko yakho kwaye wenze isaphetha.
Le bun isisiseko kakhulu, kuya kufuneka ukame iinwele umva kwaye uzibophe ngaphandle kokuziphakamisa. Kule nto awuzukufuna ukwahlula naphi na, kuya kufuneka ubuyise iinwele emva kwaye uzikame ngeminwe yakho okanye ngekama, ukuze ungafumani zigaqa zincinci zingafunekiyo.
Ungayimanzisa ikama kancinci xa uyibrasha kwaye udibanise ijeli yokulungisa encinci. Xa sele ulungile, qhina iinwele ngebhanti yerabha, ekwindawo yentamo.
Kuya kufuneka usonge iinwele ujikeleze i-elastic kwaye ungavumeli nayiphi na imitya yentsimbi ukuba iphume. Ukuyilungisa, zincede ngezinye izikhonkwane zeenwele kwaye uzigqibe nge-lacquer encinci.
Olu hlobo lweenwele lulungele loo madoda athanda Iinwele ezinesibindi. Ukubunjwa kwakhe Imalunga nokuluka umphezulu wentloko ukuwugqiba kwi-ponytail oya kuyibopha ngebhanti yerabha. Ukuba le ponytail incinci iya kushiyeka ngaphandle kokungaphezulu, kodwa ukuba inkulu sinokuyiqengqa senze uhlobo lwesaphetha.
Olu hlobo lwesaphetha lunokuboniswa ngeendlela ezahlukeneyo. Ngenye yeendlela Singayenza ibhan ngendlela engacwangciswanga, isebenziseka kakhulu kwaye kungabikho njongo zokulungisa iinwele zethu kakhulu. Kodwa ngale ndlela inokuba sesikweni ngakumbi ukuba uyafuna: Siza kwenza injongo yokushiya iinwele zigudile ngasemva ngokupheleleyo, kuba oku kuya kuzinceda ngokwethu ngekama okanye ngebrashi ngenjongo yokususa amaqhina kakuhle. Siza kunyuka iinwele ngasemva kwentloko kwaye sishiye indawo leyo iqinile ngokwaneleyo ukuze ibophe iponytail. Isithsaba somphezulu wentloko kunye nela ponytail kwaye ukusuka apho siyakwenza i-bun ebonakalayo. Ukugqiba kakuhle, siya kongeza i-lacquer.
Ukuba iinwele zakho zigobile
Unokwenza i-ponytail njengoko sichazile, kuya kufuneka wenze i-bun apho ii-curls zenzakele ngeenxa zonke kwiqhina lomhashe. Olu hlobo lweenwele lithandeka kakhulu kwaye lihle kubantu abanolu hlobo lweenwele.
Kumadoda aneenwele ezinde kakhulu
Ukuba iinwele zakho zinde kwaye ngaphandle kokucheba esikalini, singenza i-ponytail, kodwa ngeli xesha i-bun iyakwenziwa ngeenwele ezikhululekileyo ezantsi. Umbono uyakhawuleza kwaye uyasebenza.
Ibhonkco encinci ikwakhona.
Yenzelwe iinwele ezimfutshane kodwa zide ngokwaneleyo ukuba zenze i-bun. Kuya kufuneka wolule nzima ngokwaneleyo kwaye ubambe iinwele zakho kakuhle ukuze ukwazi ukugubungela yonke le nto kwaye ufumane ukubopha i-elastic yeenwele.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Izaphetha zamadoda